Nhau - HV HIPOT |Kisimusi yakanaka uye Goredzva Rakanaka- basa rekuvaka timu
Pamasikati e12.24, HV HIPOT yakabata "Welcome to Shuangdan" basa rekuvaka timu.
Basa risati ratanga, vashandi veDhipatimendi reKutonga vakapa zvipo zvakanyatsogadzirirwa kune nyeredzi dzekuzvarwa muna Zvita. Basa risati ratanga, vashandi veDhipatimendi reDhipatimendi reDhipatimendi reDhipatimendi reDhipatimendi reDhipatimendi reDhipatimendi vakapa zvipo zvakanyatsogadzirirwa kune nyeredzi dzekuzvarwa muna Zvita.
Pamusoro pezvipo zvenyeredzi dzekuzvarwa, HV HIPOT yakagadzirawo bhokisi re "michero yerunyararo" kune wese mushandi uye yakatumira makomborero emhemberero yekushuvira vashandi zuva rinofadza! Pamusoro pezvipo zvenyeredzi dzekuzvarwa, HV HIPOT yakagadzirawo bhokisi re "runyararo. michero" kune wese mushandi uye akatumira makomborero emutambo kushuvira vashandi zuva rinofadza!
Mushure mekugamuchira mabhenefiti, munhu wese akatamira kuresitorendi kuti anakirwe nekaviri-dan yakakosha masikati tii nguva.Pamberi pezvibereko zvinonaka nezvikafu, munhu wese akamira akamira achifarira chikafu.Mukuwedzera kumvura yokunwa, chii chimwe chingaitwa nekapu yacho?inogona kushandiswa kugogodza "Star Star"
Zvino mumusangano unoshamisa wemutambo "Water Cup Symphony", zvikwata zviviri izvi zvakabatirana, uye mutambo mukuru we "Water Cup Symphony Concert" yakatanga!Chiitiko chekuvaka timu chakasvika pakupera kwakabudirira nekuedza kwakabatana uye kutora chikamu kwemunhu wese.Tora chikamu mukunakidzwa, pemberera mukufara!
Nguva yekutumira: Zvita-28-2021